FJKM Ankadifotsy 5 min 09 jona 2013 / SA / Fampianarana / Accueil - FJKM Ankadifotsy
5 min 09 jona 201316/06/2013 04:40
Dimy minitra 09 jona 2013
Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'I Jesoa Kristy Rankizy,
Tantaran'i Vonjy, zazavavy 14 taona no anombohanna ny fampianarana anio. Sariaka dia sariaka i Vonjy ka nanana namana be dia be.
Indray andro ary dia nananatra ny reniny hoe:
“Tandremo ny naman-dratsy ry anaka, fa ny naman-dratsy no mety hitarika anao any amin'ny lalana tsy izy. Toa hafahafa mantsy anaka ny fitafy sy ny fomba firesak'ireo namanao vao nifanena tamiko teo. “
Dia namaly azy I Vonjy nanao hoe:
“Sh ! Ny an'i neny koa ! Tsy misy naman-dratsy izany ireny ry neny a ! ireny indray izao ny fitafy lamaody vaovao. “
Nananatra azy koa rainy nanao hoe: tandremo ry Vonjy ny fahadiova-pitondratenanao, indrindra fa amin'izao fahatanoranao izao, fa sarobidy fatratra izany no sitrak'Andriamanitra, mbola mianatra izao no tokony hfantohanao.”
Dia namaly I Vonjy hoe:
“Aza matahotra ianao ry dada, namana mpiara-mianatra amiko avokoa ireny, sa tsy mahazo manana namana lehilahy koa aho ?”
Dia toy izany hatrany no nataon'i Vonjy, mahita zavatra hamaliana ireo anatry ny ray aman-dreniny.
Indray andro ary dia notaomin'ireto namany hamonjy toerana fandihizana I Vonjy, ka zary lasa fahazaranizy ireo no mamonjy izany toerana fandihizana izany. Indray maka ary dia niharan'ny loza ny fiara nitondra azy ireo tany amin'io teorana fandihizana io. Naratra tamin'izany I Vonjy ka niditra hopitaly. Rehefa nahare io loza io ny ray aman-drenin'i Vonjy dia nihazakazaka namonjy ny hopitaly nandefasana an'i Vonjy sady nitebiteby fatratra.
Rehefa nahita ireto ray aman-dreniny I Vonjy dia nitomany ka nilaza hoe:
“ Neny o, dada o, mifona aho fa nanao ny tsy mety, mety mbola ho voavoanjy ve aho ?”
Dia namaly azy reniny hoe:
“Eny anaka, mbola ho voavonjy ianao satria Jesoa Kristy dia mamindra fo rehefa mibebaka sy miverina aminy ianao”
Toy izany koa isika rankizy, raha mandeha amin'ny lalan-diso ianao, miverena amin'Andriamanitra fa izy vonona handray anao.
Manaraka izany dia manentana antsika hahay mampiasa ireto karatra roa ireto,
Dia ny karatry ny ENY, sy ny karatry ny TSIA;
Oviana no tokony hanao eny isika ary oviana no tokony hanao tsia.
Iza no tokony eken-tsika: Andriamanitra;
Dada sy Neny ihany koa izay solon-tenan'Andriamanitra hitantika maso dia tokony ekentsika ka rehefa anarin'izy ireo dia tokony hanao hoe; ENY Dada, ENY Neny. Manomboka izao ataovy fanao rehefa anarin'i Dada sy Neny ny manaiky.
Inona kosa no tokony ho lavin-tsika ? : Ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe, fadio y fanao ratsy rehetra, ny ratsy rehetra izany no tokony ho lavina. Tsy ho atao intsony izany ny manadrakadrana izao rehetra ratsy izao fa rehefa ratsy dia atao hoe: TSIA.
Dia izay ny tantaran'i Vonjy, ny tenin'Andriamanitra amehezana ny fampianarana teo dia izay hita ao amin'ny:
I Tesaloniana Toko faha 5 andininy faha 21-22 manao hoe:
“Fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy ny tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra”
Ny voninahitra hoan'Andriamanitra irery ihany, Amen.